I-Raw Estrone powder (53-16-7) hplc =99% | AASraw AmaHormones aseTyhini
/ iimveliso / AmaHormones aseTyhini / Estradiol powder Series / Estrone powder
SKU: 53-16-7. iindidi: Estradiol powder Series, AmaHormones aseTyhini
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Estrone powder (53-16-7), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nokulawulwa kwekhwalithi emgangathweni.
I-Estrone (E1) iyinxalenye ye-hormone ye-estrogen ebonakalayo kwi-BETH kunye nabasetymenusal abesifazane kunye namadoda, nabo. Yintliziyo kunye nengqondo yokukhusela. I-Estrogen yi-hormone evuselela okanye ekulawuleni ukuphuhliswa nokugcinwa kweempawu zesini zesini kwizilwanyana ezifuywayo ngokuzibophezela kwi-estrogen receptors.
Estrone powder ividiyo
I-Raw Estrone powder esisiseko Abalinganiswa
igama: Estrone powder
I-molecular Formula: C18H22O2
Isisindo somzimba: 270.37
Ukusetyenziswa kwe-Estron powder
U-Estrone uyaziwa njenge-E1, i-oestrone, i-Folestulin, i-OESTRONE, iTheelin, i-Estrovarin.
Usetyenziso oluninzi lwe-Estrone powder
I-Estrone iyafumaneka kula manqanaba alandelayo:
I-Estrone 2 Mg / ml Isixazululo se-Intramuscular
I-Estrone 5 Mg / ml Isixazululo se-Intramuscular
I-Estrone Inkomfa Yobunzima
Isilumkiso kwi-Raw Estron powder
U-Estrone uyaziwa ngokuba yi-carcinogen yamabhinqa abantu kunye nokubangela isifuba okanye intlungu, isicathulo, intloko, umfutho wexinzelelo, kunye neenyawo zomlenze. Kwamadoda, i-estrone iye yaziwa ngokubangela i-anorexia, isicupunu, ukuhlanza, kunye ne-erectile disys function.
Ifom ehamba phambili ye-estrogen eyenziwa ngexesha lokuphuma kwesisu. Kuveliswe ikakhulu kwiibindi zesibindi kunye neoli. Ekubeni i-toxins efana ne-xenoestrogens, isinyithi esinzima kunye nezinye izinto ezingcolileyo ezichaphazela ngqo ama-hormone zigcinwe kwisibindi sakho kunye nama-fat cells, abantu abanamazinga aphezulu atyhefu baye batshintshisa kwaye bahlambulukileyo.
I-Raw Estrone powder Marketing
Indlela yokuthenga u-Estrone powder ukusuka kwi-AASraw
I-AASraw inikeza ubungqina 99% Estrone eluhlaza ngokubhekisele kwi-hormone yomdlavuza oyingozi ekusebenziseni ngomlomo.
Estere Raw Powder Recipes